Banaan baxyo ka socoda Fenezuwella oo looga soo horjeedo madaxweynaha dalkaas.
Banaan baxyo ay dhigayaan noocyada kala duwan ee bulshada dalka Fenezuwella ayaa ka dhacayay magaalooyin kala duwan oo katirsan dalkaas, kuwaas oo looga soo horjeedo madaxweynaha talada haya Necklos. Banaan baxyda oo soo billowday dhowr maalmood kahor, waxaa dhigaya taageerayaasha xisbiba Mucaaradka, waxaana ay dalbanayaan in la cayimo waqtiga ay dheceyso doorasahada madaxtinimada, islmarkana cunaqabateynta laga qaado dhaq dhaqaaaqa siyaasadeed ...	Read More »
Xukuumadda ka dhisan dalka Bangaledesh ayaa xukun dal dalaad ah waxay ku fulisay saddex Ruux oo lagu eedayay in dalkaas ay ka fuliyeen weeraro khasaare dhaliyay sanadkii 2004. dadka xukunka dal dalaadda ah lagu fuliyay waxaa kujira maxadii xarakada Al-Jihaad Al-Islaami oo lagu magacabo Mufti Cabdil xanaan oo 60 sano jir ah, halka labada soo harteyna la sheegay iney ahaayeen ...	Read More »
Barnaamijka Dhacdooyinka DUnida Islaamka waa mid kamid ah barnaamijyada ka baxa Al-Furqaan, waxaana looga faalloodaa arimaha dunida Islaamka.	Read More »
Sida ay xaqiijiyeen Jihaadiyiin ku sugan dalka Suuriya oo isticmaala baraha Internetka, waxaa duqeyn diyaaradeed lagu dilay Sarkaal katirsan kooxaha Mucaaradka Suuriya ee dagaalka kula jira Nidaamka Nusayriyada iyo malleeshiyaadka Rawaafida. Sarkaalkan la dilay waxaa lagu magacaabaa Abuu Jaamir Al-Xamawi waxaana uu ahaa madaxa maxkamadda isbaheysiga jihaadiga ee Jayshul Fatxi oo ay ka koobanyihiin jamaacaad badan oo Jihaadi ah oo ...	Read More »
Maraykanka oo qirtay inuu dad ku xasuuqay Muusil.
Dowladda Maraykanka oo duulaan qaawan oo dhanka hawada ah kawada dalka Ciraaq ayaa markii ugu horreysay waxay qiratay iney tobanaan Ruux ay ku leysay duqeymo ay k fulisay magaalada Muusil ee dalka Ciraaq. Jeneraal Joseph Votel oo ah madaxa ciidamada Maraykanka ee bariga dhexe oo hadlay ayaa sheegay iney duqeyn naxdin badan ay ka fuliyeen dhanka galbeed ee magaalada Muusil ...	Read More »